Kooxda Banadir Oo diyaar garoow ugu jirta kulanka beri ay la dheeleyso kooxda Jabuuti Telecom+Sawiro | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kooxda Banadir Oo diyaar garoow ugu jirta kulanka beri ay la dheeleyso kooxda Jabuuti Telecom+Sawiro
(04-05-2018) Kooxda kubadda cagta Banadir Sports Club ayaa maalintii shaley sameysay tababarkii ugu dambeyay ay iskugu diyaarineyso kulanka bari ay la dheeli doonto kooxda Jabuuti Telecom ciyaar qeyb ka ah tartanka Jaamacada Carabta.
Tartankan waxaa ciyaara kooxaha horyaaladooda ka soo gala kaalinta 2-aad, Kooxda Banadir sanadkii ugu dambeyay waxey ku dhameysatay booska 2-aad ee horyaalka taa ay keentay iney ciyaarto Tartanka Jaamacada Carabta.
Kooxda Banadir ayaa heesa hogaanka horyaalka Somali premier League iyado leh 38-dhibcood halka kooxda 2-aad fadhiso ee Dekedda leedhahay 33-dhibcood, balse Dekedda waxaa u harsan 2-kulan halka ay Banadir dhamaan kulamadeyda hormarsatay.
Xidigahan ayaa ku sugan wadanka aan dariska nahay ee D, Jabuuti waana halka tartanka uu ka dhacayo waxaana wafdiga hogaaminaya gudoomiye ku xigeenka xiriirka kubadda cagta Mudane Cali Shiine.
Tartanka ayaa ka qeyb galaya 3-kooxda oo kala ah Jabtuuiti Telecom, Banadir Sports Club iyo kooxda ka socota wadanka Comoros.